သနားချီးမြင့်တော်မူ၏.ရေကြည်ရာ မျက်နုရှာ..ဆိုတာဟာ.တကယ်တော့ မကောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့.
ခု..အရှင်ဘုရားတို့တတ်နေကြတဲ့ MA..နှင့် PH.D တတ်နေကြတာ.ပညာကိုသင်ယူကြပါ..တဲ့..
ဒီမှာ..မင်း..တို့ အိမ်တွေငှားနေ..ကိုယ့်ဘာသာကို ချက်စားနေကြတာ.လဲသိတယ်.ဒါ့.ကြောင့်.ပေး
လာကြနေသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေပါလဲ..? ဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မလဲ.ရွှေမြန်မာတို့ပေါ့..ရွှေဝါရောင်
သင်္ကန်းတွေနဲ့.အခြင်းခြင်းတူရာတူရာ.စုပြီး..တက္ကစီကားလေးတွေဖြင့်၎င်း.ဆိုင်ကယ်များဖြင့်၎င်း..အသီးသီးကြွရောက်လာကြခြင်းဟာ..ညီညွတ်ခြင်းရဲ့အင်အားတွေစုတည်လို့.ဟို..အဝေးတနေရာက.BHU.တက္ကသိုလ်မှ၎င်း.မြန်မာတို့အနေများသော မိဂဒါဝုန်နားမှာ နေကြသော..စရဏ .မှ၎င်း.အသီးသီး
တတ်ရောက်လာကြသည်ကား..ပျော်ရွှင်စရာကြီးပါလား..နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်အားလည်း အမိမြန်မာပြည်၌.ဖူးဘို့ရာမလွယ်ကူလှ..ယ္ခုမူကား..ဆရာတော်ကပ်လှူသောဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေးကြ
မထင်.ဆရာတော်လည်းဖူးရ..ဆွမ်းလည်းဘုဉ်းပေးရမို့.နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာကျော် ဆရာတော်ကပ်လှူ
တော်ကြီးလေးတွေရဲ့.ပူပြင်းလှတဲ့အိန္ဒိယ ရာသီဥတုကို ဂရုမထားပဲ.ပျော်မဆုံး..မော်မဆုံးပီတိလေး
တွေနဲ့အပြုံးပန်းလေးတွေ ပွင့်လန်းနေတာလေးကိုတွေ့လိုက်ရတော့.ဟဲ ဟဲ .ဘလော့ဂါတယောက်ရဲ့
ကျေးတောသား အရိုင်းစိုင်းလေးပေါ့..ခရင်းကြီးကိုင်လို့ စားရခြင်းသည်.အခက်တွေ့တော့၏..
သင်္ကြန်အတတ်နေ့ကား..မြန်မာရဟန်းတော်လေးများရဲ့ ပီတိ တို့သည်..စားရတဲ့ပီတိ.ဖူးမြင်လိုက်
နောက်ပြီး ဒီနိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုသည်လည်း.အပူချိန်.၄၅ ရှိနေတော့မိမိတို့အခဏ်းတွင်း.အိမ်အတွင်းမှာ
တရတွေ့ဆုံဘို့ .ညီညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်ကြလို့ မပြောသော်လည်း ပြောသွားသကဲ့သို့ကျောင်းသား
လေးတို့ရဲက ဗာရာဏသီရွှေမြို့တော်ရှိရဟန်းတော်တွေသည်လည်း ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် ဆရာတော်
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 10:46 AM